Knowledge – Page3– Healthy Life Journal
All posts tagged "Knowledge"
ဘယ်သန်တွေမှာ ဘာအားသာချက်တွေ ရှိသလဲ
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ညာသန်တွေများတဲ့အတွက် ညာသန်တွေအတွက်ချည်း သီးသန့်ပြုလုပ်တီထွင်ထားတဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ဘယ်သန်တွေအတွက် အခက်အခဲ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ လူဦးရေရဲ့ ၇-၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ဘယ်သန်တွေဖြစ်ကြပြီး ဘယ်သန်အများစုက အမျိုးသားတွေ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေ (ဥပမာ-အင်ဂျလီနာဂျိုလီ) ဘယ်သန်ဖြစ်ရင် ပိုပြီးထူးခြားတတ်တယ်လို့...
အလုပ်လုပ်ရာမှာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ရောက်စေဖို့ . . .
———၊ လရိပ်မေ ၊——— အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ပန်းတိုင်ရောက်စေဖို့ နေ့စဉ်လိုက်နာသင့်တဲ့ မှတ်သားစရာတွေကို အကြံပြုပါရစေ။ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရန် ‘ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ’ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတွေအရ ဘဝမှာ ရန်သူမရှိစေဖို့ တူညီတဲ့အဖြေတစ်ခုကို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့”ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကို...
တစ်နေ့တာအတွင်း အလုပ်တွင်စေမယ့် လှည့်ကွက် ၁၀
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးလို့ ညဘက်ရောက်တဲ့အခါ ဒီနေ့ကတော့ ဘာအလုပ်မှ မပြီးလိုက်ပါ့လားဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့နဲ့ အလုပ်တွင်စေဖို့ အောက်ပါလှည့်ကွက် ၁၀ ရပ်ကို သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ (၁) နံနက်မှာ ပုံမှန်ထက် ၂ နာရီစောပြီး အိပ်ရာထပါ။ (၂) မနက်ခင်းမှာ...
သင်ရဲ့တစ်နေ့တာမှာ အချိန်တစ်နာရီ ပိုရခဲ့မယ်ဆိုရင် . . .
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ကျွန်မတို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရအောင်။ ဆိုပါစို့ ၂၄ နာရီရှိတဲ့ တစ်နေ့တာမှာ အချိန်တစ်နာရီ ပိုရခဲ့ရင် အဲဒီတစ်နာရီကို သင်ဘာလုပ်မလဲ။ (၁) တီဗီကြည့်မလား၊ (၂) ဝါသနာပါတဲ့အရာကို လုပ်ဆောင်မလား၊ (၃) အိပ်စက်မလား၊ (၄) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မလား၊...
ဒေါသကြီးတဲ့ သင့်ကလေး စိတ်ထိန်းတတ်ဖို့ ဘယ်လိုလမ်းညွှန်ပေးသင့်သလဲ . . .
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— လူတိုင်း ဒေါသထွက်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါသကြီးတဲ့သူ၊ ဒေါသသိပ်မထွက်တဲ့သူဆိုပြီး ကွာခြားမှုတော့ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒေါသထွက်တာက လူတိုင်း ဖြစ်တတ်ပေမယ့် တချို့လူတွေက ဒေါသကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး တချို့က မရှိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်ကလေးငယ်ဟာ ဒေါသကြီးတယ်ဆိုရင်၊...
ဆယ်ကျော်သက်ထိန်းကျောင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိဘတိုင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဒီနေ့ခေတ်မှာ အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အပျော်အပါး၊ ဂိမ်းအလွန်အကျွံဆော့ခြင်း စသဖြင့် စုံလင်တဲ့ မကောင်းတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေ ရှိနေတာကို ဆယ်ကျော်သက်မိဘတွေ အထူးသတိထားရပါမယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲ ဝင်လာချိန်မှာ ဖိအားတွေကလည်း များလှတာကြောင့်...
ပူလွန်းသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်စီးသည့် အမျိုးသားများ သုက်ပိုးထိခိုက်ပြီး မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကျစေနိုင်
———၊ ကိုထက် ၊——— အချိန်ကြာကြာ ဆိုင်ကယ်စီးပြီး ပူတဲ့ထိုင်ခုံပေါ် ထိုင်စီးရတဲ့ အမျိုးသားတွေက ဝှေးစေ့မှာ မကောင်းတဲ့ သက်ရောက်မှုဖြစ်စေပြီး သုက်ပိုးတွေရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ အရည်အချင်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ အဲဒီနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်း ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းအရောင်းကုမ္ပဏီရဲ့ ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်လုပ်သူ မစ္စနာဟိုအန်းက...
ကလေးငယ်ကို ရေကူးနည်းမသင်ပေးခင် ဘေးကင်းရေးအတွက် သိသင့်သော အခြေခံအချက်များ
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကလေးတွေကို ရေကူးသင်ပေးတာက အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ရေကူးတဲ့ အားကစားနည်းဟာ ကလေးငယ်ရဲ့ ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အရေးပါတဲ့အပြင် ပင်လယ်ကမ်းခြေသွားတဲ့အခါ မတော်တဆ အန္တရာယ်ကြုံလာပါက ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်စေပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေကို အလွန်ငယ်ရွယ်တဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားမှာ ရေကူးနည်းသင်ပေးတာဟာ အလွန်သင်ရလွယ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာချိန်မှာ...
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ရှုံးနိမ့်သော အကြိမ်ရေ = ၁၂ ကြိမ် ဂျေကေရိုးလင်းက ဟယ်ရီပေါ်တာ စာအုပ်မတိုင်ခင် ထုတ်ဝေသူ ၁၂ ဦးဆီက ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရှုံးနိမ့်သော အကြိမ်ရေ = ၃၀၂ ကြိမ် ဒစ်စနေလန်းကို...
ကလေးငယ်ကို ရိုက်နှက်ပြီး ဆုံးမသင့်ရဲ့လား……
————–၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊————– အရင်တုန်းက ကလေးတွေကို ဆုံးမတဲ့နေရာမှာ မိဘတွေဟာ အိုးကောင်းလိုချင်ရင် နာနာပုတ်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်း အုပ်ထိန်းကြပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပြုမူနေထိုင်ပုံမှားနေရင် မိခင် ဒါမှမဟုတ် ဖခင်ဖြစ်သူက လက်/တုတ်နဲ့ ရိုက်ပုတ်ပြီး အပြစ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးဟာ နာကျင်သွားရင်...